Faransiiska oo aad uga carooday midab takoor lala beegsaday xiddigooda da’da yar ee Kylian Mbappé – Gool FM
Faransiiska oo aad uga carooday midab takoor lala beegsaday xiddigooda da’da yar ee Kylian Mbappé
(Paris) 18 Feb 2019. Qoraal lagu qoray gudaha tareen dhulka hoostiisa mara ee magaallada Paris ayaa lagu caayay xidigga kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka Faransiiska Kylian Mbappé, waxaana haatan la furay dacwad lagu baarayo arrintaasi.
Qoraalka meesha ku qornaa ayaa si shaqsi ahaaneed loogu gafay Mbappé oo lagu tilmaamayay mid Madoow Yuhuud ah, waxaana qoraalkaasi ay dowladdu sheegtay in uu wax u dhimayo sumcadda iyo kala duwanaanshaha shacabka Faransiiska.
Mbappé oo 20 jir ah ayaa waxaa iska dhalay Aabe Cameroon ah iyo Hooyo Algerian ah, waxaana uu ku dhashay magaallada Paris, isagoo ahaa da’yarkii ugu wanaagsanaa Koobkii Adduunka 2018 ee lugtiisa Faransiiska ugu qaaday Koobkaasi, isagoo dhaliyay goolkii 4-aad ciyaartii kama dambeysta ahayd ee ay 4-2 kaga guuleysteen Croatia.
Xiriirka kubadda cagta Faransiiska LFP ayaa warbixin ka soo saaray gefka loo geystay Mbappé, waxaana uu xiriirku sheegay in qaladka nuucaasi ah marka si bareer ah loo bar tilmaameedsado ciyaartooy iyadoo lagu durayo midabkiisa inay noqonayso weerar toos ah oo lagu qaaday Faransiiska.
Dhanka kale Shirkadda tareennada Faransiiska ‘SNCF’ ayaa iyaduna muuqaal video ah oo laga duubay goobtii qoraalka lagu buufiyay waxa ay u gudbisay Booliska oo hatan kiiskaasi baaraya, iyadoo qoraalkiina laga masaxay halkii lagu qoray.
Shaxda rasmiga ah kulanka FA Cup-ka ee kooxaha Chelsea Vs Manchester United